Labsiin Magaalota Oromiyaa Dhaabuuf jedhamee dhihaate Caffeen marii gabaabduu booda ibsa gahaafi jijjiirama tokko malee dabarsitee jirti. Oromia Shall be Free |
Labsiin Magaalota Oromiyaa Dhaabuuf jedhamee dhihaate Caffeen marii gabaabduu booda ibsa gahaafi jijjiirama tokko malee dabarsitee jirti.
bilisummaa December 12, 2015	Comments Off on Labsiin Magaalota Oromiyaa Dhaabuuf jedhamee dhihaate Caffeen marii gabaabduu booda ibsa gahaafi jijjiirama tokko malee dabarsitee jirti.
Labsiin kun Maastar Pilaanii Finfinnee hojirra oolchuuf seeraan hayyame jechuudhaa? Ifatti hin hayyamne. Garuu Maastar Pilaanii bira dabree dantaa Oromoofi Oromiyaan magaalota irraa qabu miidhuuf karaa guddaa bane. Akka armaan gadiitti laalla.
Labsiin kun Maastar Pilanii Finfinnee hojirra oolchuuf suduudaan hin hayyamu. Mataduremarraayyuu ‘magaalota Oromiyaa’ waan jedhuuf ‘walitti makamiinsa’ wanni jedhame kun magaalotuma Oromiyaa jidduutti daangeffama jedhamee waan fudhatamuuf yaaliin magaalota Oromiyaa kan naannoo biraatin walitti makuuf ifatti hin hayyamne. Ammoo walitti makamuun makamuun kun magaalota Oromiyaa giddutti qofa jedhamees ifa waan hin ta’iniif warra magaalota Oromiyaa muratee fudhachuu fedhiifis baniinsa ( loophole) guddaa qaba.
Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. Sirnoota dabran keessatti aadaan magaalaa qilleensa farra Oromoo ta’een waan guutamee, akkasumas Oromoon sirna abbaa lafaatin lafa baadiyyattin waan walitti hidhameef magaalaatti kan godaanu xiqqaa ture. Bara mootummaa kanaa ammoo magaalonni adaduma babal’ataniin qonnaan bulaa Oromoo lafarraa buqqaasaa lafa isaatirra alagaa maallaqaan lafa bitate qubsisaa jiran. Kanaafu, magaalota Oromiyaa keessa qabiyyeen jiraattotaa ( demographics) alagaatu heddummaata. ‘Fedhiifi waliigaltee jiraattotaa’ yoo jedhamu ammoo kan warra magaalaa san keessatti baay’ina wayyaba qabuu ( majority) jechuudha. Kanaafuu labsiin kun imaammataafi fuulduree magaalota Oromiyaa keessa jiranii harka Oromootii baasee alagaadhaaf laatee jira.
Akkuma namuu argu labsiin kun ogeeyyota Oromootin qoratamee akka hin dhiyaatin ifa. 1ffaa Afaan Amaaraatirraa garagalfamuun ifatti mul’ata. 2ffaa ‘koreen’ silaa labsii kana qopheesse jedhamee Caffeetti dhiheessi yaadrimee xixiqqaa kabsii kana keessatti hammatameeyyuu sirritti akka hin galiniif deebii isaan gaafii ka’aniif kennani irraa beekuun ni danda’ama.( Fkn. garaagarummaan regiopolis fi metropolis maal akka ta’e waan hin galiniif walitti laqaa turan)
1) Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee akka jiruun osoo dhiheessanii mormiin jabaan akka isaan qunnamu ni beekan. Kanaafuu labsii Pilaanicha suduudaan ammumatti hojirraa oolchuuf isaanif hayyamu yoo argachuu dadhaban, kan dhawaatan galmaan gahuuf isaniif karaa saaqu baafatan. Akka labsiin kun isaaniif hayyametti, lafa Oromoo bitachaafi waliif kennaa waggota muraasa keessatti qabiyyee ( demographics) ‘jiraattota’ magaalota naannoo Finfinnee daran jijjiruun alagoomsu. Waggoota lamaan takka booda fedhiifi waliigaltee ummata Finfinneetifi kan Burraayyuu, Sululta, Sabataa kkf sababeeffachuun magaaloonni kun Finfinnee jalatti galan.Gaafas labsii kanaafi ‘fedhii jiraattotaa’ waabeffachuun ‘seeraan’ Masster Pilaanii sani hojirra oolfatu.
Walumaa galatti labsiin kun balaan inni Oromoofi Oromiyaaf qabu kan Maaster Pilaanii Finfinnee daran akkaan badaadha. Hogganoonni OPDO fi miseensonni Caffee labsi shira akkanaa of keessatti hammate kana akka dantaa saba kanaa eegsisuun osoo hin fooyyessin, akkuma gubbaa itti kennametti raggaasisuu isaanitif yakkamtoota seenaati. Ummanni keenyas balaa itti aggaamame kana bifa maraan dura dhaabbachuuf dhugaafi dirqama qaba!
Previous ‪#‎oromoProtests‬ students at Jimma University, Kitto Furdisa campus continue their mourning protest
Next ‪#‎OromoProtests‬ Oromos in Chicago disrupt Girma Birru’s meeting in Chicago